Ny Dachshund sy ny aretina matetika matetika | Tontolo alika
Ny Dachshund dia malefaka avokoa, tsy isalasalana fa alika manintona tokoa, ho an'ireo izay tia azy ireo ary nieritreritra ny hanana iray ao an-trano dia tokony hahafantatra fa toy ny karazany hafa, mijaly amin'ny aretina sasany izay mahazatra ny razambeny izy ireo ary mety ho mpandova mihitsy aza izy ireo.
Ny Dachshund dia manana ny tantarany manokana, efa niara-niaina tamin'ny olombelona efa ho zato taona, izany vokatry ny fiampitana hazakazaka telo, dia avy any Alemana ary amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatsika hoe iza no aretina matetika matetika amin'ity karazana ity.
1 EDI na aretina invertebral disc
4 Aretin'ny maso
6 Patolojia Von Willebrand
EDI na aretina invertebral disc
La endrik 'ny vatany, mahia sy lava Io no mahatonga ny fijaliana amin'ity aretina ity, tena maharary ho an'ny biby, izay misy ny fananganana kapila herniated sy ny famindrana ireo kapila avy amin'ny toerana niandohany; ny endrik'ilay vatana miraikitra amin'ny fohy ny ranjony dia miteraka tsindry betsaka amin'ny kapila, izay amin'ny fotoana maharitra dia mitarika mankany amin'ny patolojia voalaza.
Ny vahaolana dia amin'ny alàlan'ny fandidiana fanitsiana na famandrihana seza misy kodiarana, izay tsy maintsy ampiasainy mandritra ny androm-piainany hanatsarana ny kalitaon'ny fiainany, norarana tsy hitsambikina na hiakarana tohatra.
Na dia tsy naseho aza fa ny tsy fisian'ny fanatanjahan-tena dia iray amin'ireo antony mahatonga an'io aretina io any Dachshunds soso-kevitra ny hankafizan'ireny toerana malalaka ireny izay ahafahan'izy ireo mihazakazaka sy milalao isan'andro mba hialana amin'ny lalana sy ny hafa.
Momba izany fery amin'ny hoditra izay tsy manam-paharoa amin'ny karazany Dachshund ary amin'ny fahazazany fotsiny dia ahitana ny fisehoan'ny karazam-bibikely volondavenona amin'ny faritra perianal sy amin'ny fehin-tànana; tsy miseho amin'ny rehetra io alika amin'ity karazany ity Fa raha vao miseho izany dia mijanona eo amin'ny hodiny mandritra ny androm-piainany ny aretina, noho izany dia tsy maintsy tsaboina amin'ny fanafody na vokatra fidiovana manokana nomen'ny mpitsabo biby mba hisorohana ireo aretina.
Ny fitomboan'ny famokarana hormonina tiroida dia mahazatra ihany koa ny Dachshunds mihoatra ny 5 taona, izany dia mety hiteraka diabeta sy aretim-po.
Ny fomba iray hamantarana azy dia raha mampiseho fiovana amin'ny toetrany ny alikanao, toy ny tsy firaharahiany, alahelo, na fipoahana mahery vaika, ampiarahana amin'ny fitomboan'ny lanjany haingana.
Betsaka ny areti-maso izay misy fiantraikany amin'ny Dachshunds, ny sasany dia mpandova, ny katarakta dia iray amin'izany, izay mahazo manaloka tanteraka ny fahitanao.
Ny iray hafa dia ny glaucoma izay ny diagnostika aloha dia afaka mamonjy ilay alika tsy ho very tanteraka ny fahitany, koa raha fantatrao fa mora tohina io karazany io, asaivo mijery ny fihenan'ny masony ny mpitsabo anao amin'ny fitsidihanao mahazatra.
Ny aretina mahazatra iray hafa izay misy fiatraikany amin'ny fahitana dia atrophy retina miandalanaAraka ny asehon'ny anarany dia mihena tsikelikely ny fahitana mandra-pahatonga azy tsy hahay hanavaka amin'ny alina na rehefa misy hazavana manjavozavo.
Misy ny herisetra tampoka izay misy fiantraikany amin'ny vatana iray manontolo ary tsy voafehy; Ity aretin-tsaina ity dia mety hanimba ny taovan'ny alika noho ny fihozongozonana mahery vaika ary mety hiteraka fahasimban'ny neurôlôjia tsy azo ovaina ihany koa, kanefa, azo fehezina mandritra ny androm-piainana miaraka amin'ireo fanafody nomen'ny mpitsabo anao izany.
Patolojia Von Willebrand
ny amin'ny famokarana hemorrhages lehibe miaraka amin'ny fisian'ny tsiranoka tsotra, noho izany dia tsy maintsy fehezina mafy amin'ny fiainana izy io mba hialana amin'ny fahatapahana, fiterahana na aretina miteraka ra.
Ireo izay matetika mazàna dia ireo manana volo fohy dia:
Fako demodika, izay miseho amin'ny faritra misy ny hoditry ny biby ary miteraka fihenan'ny volo.
Seborrheic dermatitis, ahitana ny peeling ny hoditry ny Dachshund sy ny mangidihidy mafy any amin'ireo faritra voakasik'izany, dia mety ho hoditra avokoa ary matetika dia mandova.
Ny astétanien cutanère dia misy fiatraikany amin'ny firafitry ny collagen ao amin'ny hoditry ny biby, ka mahatonga azy io ho lasa elastika kokoa noho ny tokony ho izy, noho izany dia asehon'ilay alika ny valan-koditra mihantona ary vaky mora foana ny fifandraisana noho ny fahalemeny. Lova ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ny Dachshund sy ny aretina matetika matetika
Ny mampiavaka ny Neapolitan Mastiff
Mety ve ny mampionona alika hanapaka ny volony?